Akụkọ - nlekọta ihu HIFU: kedu ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ, mmetụta, ọnụ ahịa, wdg.
Ultrasound siri ike lekwasịrị anya ihu, zoro aka dị ka HIFUọdịdị ihu, bụ ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ maka ịka nka ihu. Usoro a bụ akụkụ nke usoro na-arịwanye elu na ọgwụgwọ mgbochi ịka nká nke nwere ike ịnye ụfọdụ uru nke ihu ihu na-enweghị ịwa ahụ.
Dabere na data sitere na American Academy of Aesthetic Plastic Surgery, ewu ewu nke usoro ịwa ahụ anaghị abawanye site na 4.2% na 2017.
Ngwọta ndị a na -adịghị emerụ ahụ nwere oge mgbake dị mkpụmkpụ karịa ụzọ ịwa ahụ, mana nsonaazụ ha na -enye adịghị mkpa ma ọ gaghị adịte aka. Ya mere, ndị na -ahụ maka akpụkpọ anụ na -atụ aro ijiHIFU naanị maka ihe nrịba ama dị obere ma ọ bụ karịa ma ọ bụ mmalite nke ịka nká.
N'isiokwu a, ka anyị leba anya n'ihe ihe usoro a gụnyere. Anyị nyochakwara arụmọrụ ya yana ma enwere mmetụta ọ bụla.
HIFUNlekọta ihu na -eji ultrasound iji mepụta okpomọkụ n'ime akwa akpụkpọ ahụ. Okpomoku a na -emebi sel anụ ahụ ezubere iche, na -eme ka ahụ nwaa ịrụzi ha. N'ihi nke a, ahụ na -emepụta collagen iji nyere aka melite sel. Collagen bụ ihe dị na akpụkpọ ahụ nke na -enye akpụkpọ ahụ nhazi na elasticity ya.
Dabere na American Board of Aesthetic Surgery, ọgwụgwọ ultrasound na-abụghị nke ịwa ahụ dịka HIFU nwere ike:
Ụdị ultrasound eji maka usoro a dị iche na ultrasound nke ndị dọkịta ji ese foto ahụike. HIFU na-eji ebili mmiri dị elu wee gbado anya n'akụkụ ụfọdụ nke ahụ.
Ndị ọkachamara na -ejikwa ya eme ihe HIFU ịgwọ etuto ahụ ogologo oge, usoro siri ike karị nke nwere ike ịdịru awa 3 na nyocha MRI.
Ndị dọkịta na -amalitekarị HIFUmweghachi nke ihu site na ihicha ebe ihu ahọpụtara yana itinye gel. Mgbe ahụ, ha na -eji ngwaọrụ mkpanaka wepụta ebili mmiri ultrasonic ruo obere oge. Oge nke ọ bụla na-ewekarị nkeji 30-90.
Ụfọdụ ndị mmadụ na -ekwupụta obere ahụ erughị ala n'oge ọgwụgwọ, ụfọdụ na -enwekwa mgbu mgbe a gwọchara ha. Dọkịta ahụ nwere ike iji ọgwụ anestetiiki mpaghara tupu a waa ya ahụ iji nyere aka gbochie mgbu a. Ọgwụ mgbu n'elu-na-counter, dị ka acetaminophen (Tylenol) ma ọ bụ ibuprofen (Advil), nwekwara ike nyere aka.
N'adịghị ka usoro ịchọ mma ndị ọzọ (gụnyere iwepụ ntutu laser), HIFUnlekọta ihu anaghị achọ nkwadebe ọ bụla. Mgbe usoro ọgwụgwọ gwụchara, enweghị oge mgbake, nke pụtara na ndị mmadụ nwere ike ịga n'ihu n'ihe omume ha kwa ụbọchị mgbe ha natasịrịHIFU ọgwụgwọ.
Ọtụtụ akụkọ na -ekwu na HIFUọgwụgwọ ihu na -adị irè. Nyochaa 2018 lere ọmụmụ 231 anya maka iji teknụzụ ultrasound. Mgbe ha nyochasịrị ọmụmụ gbasara ọgwụgwọ ultrasound nke akpụkpọ anụ, nkwụsi ike nke anụ ahụ, na mbelata cellulite, ndị nyocha ahụ kwubiri na teknụzụ dị mma ma dịkwa mma.
Ndị American Council of Aesthetic Surgery na-ekwu na nkwụsi ike ultrasonic na-arụpụta ezigbo nsonaazụ n'ime ọnwa 2-3, yana nlekọta anụ ahụ nke ọma nwere ike inye aka idobe mmetụta ndị a ruo otu afọ.
Ọmụmụ maka ịdị irè nke HIFUọgwụgwọ ihu maka ndị Korea chọpụtara na usoro a kacha arụ ọrụ iji meziwanye ọdịdị nke ndọlị n'akụkụ agba, ntì na ọnụ. Ndị ọrụ nyocha na -atụnyere foto ọkọlọtọ nke ndị sonyere tupu ọgwụgwọ na ọnwa 3 na ọnwa 6 ka a gwọchara ya.
Ọmụmụ ihe ọzọ tụlere ịdị irè nke HIFUọgwụgwọ ihu ka ụbọchị asaa, izu anọ, na izu iri na abụọ gasịrị. Mgbe izu iri na abụọ gachara, nchacha akpụkpọ nke ndị sonyere na -akawanye nke ọma na mpaghara ọgwụgwọ niile.
Ndị nchọpụta ndị ọzọ nyochara ahụmịhe ụmụ nwanyị 73 na ụmụ nwoke abụọ na -anata HIFUọdịdị ihu. Dọkịta nke nyochara nsonaazụ ya kọrọ mmụba 80% na akpụkpọ ihu na olu, ebe afọ ojuju nke ndị sonyere bụ 78%.
E nwere dị iche iche HIFUngwaọrụ n'ahịa. Nnyocha e jiri tụnyere ngwaọrụ abụọ dị iche iche site n'ịjụ ndị ụlọọgwụ na ndị mmadụ na -anataHIFUnlekọta ihu iji nyochaa mmetụta. Ọ bụ ezie na ndị sonyere kọrọ ọdịiche dị na ọkwa mgbu na afọ ojuju n'ozuzu ha, ndị nyocha ahụ kwubiri na ngwaọrụ abụọ ahụ nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ sie ike.
Ọ dị mma ịmara na nke ọ bụla n'ime ọmụmụ ihe ndị a dị n'elu metụtara naanị mmadụ ole na ole sonyere.
N'ozuzu, ihe akaebe na -egosi na HIFU nlekọta ihu nwere mmetụta ole na ole, ọ bụ ezie na ụfọdụ mmadụ nwere ike nweta mgbu na ahụ erughị ala ozugbo ịwachara ahụ.
Ọmụmụ South Korea kwubiri na ọgwụgwọ ahụ enweghị nnukwu mmetụta ọ bụla, n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị sonyere kọrọ:
N'ọmụmụ ihe ọzọ, ndị nchọpụta chọpụtara na n'agbanyeghị na ụfọdụ ndị natara HIFU ọgwụgwọ na ihu ma ọ bụ ahụ ha kọrọ ihe mgbu ozugbo ọgwụgwọ gasịrị, ka izu 4 gachara, ha akọghị ihe mgbu ọ bụla.
Nnyocha ọzọ chọpụtara na 25.3% nke ndị sonyere nwere ihe mgbu mgbe ịwachara ahụ mana ọ ka mma n'enweghị enyemaka ọ bụla.
Nnukwu ike lekwasịrị anya ultrasound ihu ma ọ bụ HIFU ihu nwere ike ịbụ ụzọ dị irè iji belata ihe ịrịba ama nke ịka nká.
Dị ka usoro na-abụghị ịwa ahụ, HIFUchọrọ oge mgbake dị mkpụmkpụ karịa ịwa ahụ, mana nsonaazụ ya agaghị apụta nke ọma. Ka o sina dị, ndị nyocha ahụ chọpụtara na usoro ahụ nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ na -ama jijiji, wrinkles dị mma ma melite ụdị anụ ahụ.
Collagen bụ protein a na -ahụ n'ime ahụ niile. Otu n'ime ọrụ ya bụ inyere mkpụrụ ndụ akpụkpọ aka aka imezi na idozi onwe ha. Nri Collagen nwere ike…
Enwere ọtụtụ ihe kpatara akpụkpọ anụ na -ada ada, gụnyere ịka nká, ibu ngwa ngwa na ịtụrụ ime. Mụta ka esi egbochi ma mechie akpụkpọ ahụ na -ama jijiji…
Agba nke dị n'okpuru bụ oke akpụkpọ anụ n'olu. Mụta maka mmega ahụ na ọgwụgwọ maka iwepụ agba, yana otu esi enyere aka gbochie ya.
Ihe mgbakwunye Collagen nwere ike inye aka melite ahụike akpụkpọ ahụ. Collagen bụ protein nke na -akwalite mgbanwe akpụkpọ ahụ. Ọtụtụ mmadụ nwere ike were mgbakwunye collagen…
Lee akpụkpọ anụ ahụ gbajiri agbaji. Nke a bụ mkpesa nkịtị. Akpụkpọ ahụ na -adị gịrịgịrị ma na -agbakọta. Ọ gụnyere ozi zuru oke gbasara mgbochi na nri.